I2P uye Freenet: nzira dzakanakisa dzeTOR | Linux Vakapindwa muropa
I2P uye Freenet: dzimwe nzira kune network TOR
Zvinyorwa zvakawanda isu takatarisira kutaura nezvazvo TOR (Iyo Hanyanisi Router) uye nezvimwe izvozvi nekufarira zvakavanzika, kusazivikanwa uye kubhurawuza inozivikanwa uye isingazivikanwe yakadzika webhu ... Asi iwe unofanirwa kuziva kuti pasina kukanganisa kubva kuTOR, sezvo iri inonakidza, kune dzimwewo nzira dzakadai seI2P neFreenet.
TOR, Freenet uye I2P Iwo ndiwo maratidziro azvino ari mune yepamberi mamiriro uye akanyanya kukurudzirwa kuchengetedza kusazivikanwa uye kuvanzika paunenge uchiwana iyo Internet zvisikwa. Asi kuti tizive kuti ndeipi yatinonyanya kufarira, isu tinofanirwa kuziva imwe neimwe yemanyatso kuti tinzwisise zvizere hunhu hwayo.
Pasina kuenda zvakanyanya, isu tichataura izvozvo TOR inozivikanwa neayo ekunze "kugona" kugona uye I2P uye Freenet yeayo "inproxy" (Darknet) uye Yakavanzika VPN kugona.. Uye zvakare, iyo nzira yekufambisa ruzivo uye zvimwe zvakasarudzika zvakasiyana kubva kune imwe kuenda kune imwe. Semuenzaniso, TOR inoshandisa chiteshi chebidirectional kuendesa ruzivo kuburikidza nevatatu vanodzokorodza (rakatenderedzwa denderedzwa), nepo I2P ichishandisa maviri unidirectional chiteshi kune yega nzira yekufambisa.
Ndeipi yekusarudza? Zvakanaka, sezvandinotaura, zvinoenderana nezvido zvako. Semuenzaniso, muhondo TOR vs. I2PInofanira kucherechedzwa kuti TOR ine huwandu hukuru hwevashandisi uye zviwanikwa zviripo, ine rutsigiro rwakawanda, inopokana necesura nekuda kwehukuru hwayo hukuru, inoshanda maererano neye RAM memory memory. Asi I2P ine zvimwe zvakanakira senge sevhisi dzinoshanda zvakanyanya, sezvo isina dhairekitori repakati, kurwisa kwakanangana kwakaoma uye inotsigira UDP, TCP uye ICMP (TOR chete TCP).
Kana isu tikaongorora TOR Vs Freenet, isu tinoziva kuti ese ari maviri ane zvakanakira senge mune yakapfuura kesi TOR ine rumwe rutsigiro, inobata zvakavanzika zviri nani, inokurumidza, nezvimwe. Nepo Freenet iine mashoma muganho maererano nemasevhisi akapihwa, inogona kuve yakachengeteka kupfuura TOR sezvo paine mashoma ekurwisa maveji, ine zvayakanakira senzira yakagoverwa ichienzaniswa neyepakati peiyo TOR, ine yakawedzera seti yemabasa asingazivikanwe kupfuura TOR , uye inotsigira UDP, ICMP uye TCP protocols senge I2P.
Tinogona zvakare kuenzanisa I2P vsFreenet uye zvakare taizowana zvakanakira pamativi ese. Zvakanakira I2P pamusoro peFreenat ndiko kurerukirwa kwekugadzira chero mugero, mashandiro akanaka, kugadzikana kuita uye nematambudziko mashoma, uye kune mamwe magwaro ekuwana rubatsiro. Uye mabhenefiti eFreenat achienzaniswa neI2P ndeye ayo akaparadzirwa masisitimu nekutenda kuDataStores, rakaomarara uye rakachengeteka zita resolution system, iyo inobvumidza kuumba mapoka eShamwari mukati metiweki kuti aigadzire uye vagadzire madiki subnets ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » I2P uye Freenet: dzimwe nzira kune network TOR
Saka zvakapusa Freenet iri nani :)
Linux kernel inoshandura zvikamu zvekodhi yako kubva kuAssembler kuenda kuC
Oracle inogumburwa pamusoro yakavhurika sosi dhatabhesi